hiatrika fandidiana ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena na ny SEG Jeneraly Gellé Serge. Tsiahivina hatrany, raha ny fitantarany, fa taorian’ny fianjerana an-dranomasina ity angidimby ity dia nanavotr’aina tamin’ny alalan’ny fanatsoahana ny seza nipetrahan’ny mpanamory ary nilomano niaraka tamin’izany nandritry ny 12 ora ny SEG ny alin’io nanomboka tamin’ny 7 ora sasasany hariva ary tamin’ny 7 ora sasany maraina izy, ary mpanjono manamorona an’I Mahambo no nahita azy. Tonga nampahery ity tompon’andraiki-panjakana ity teny amin'ny hôpitaly Miaramila Soavinandriana ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena omaly maraina. Raha araka ny loharanom-baovao azo dia ao amin’ny tongony no misy faritra tsy maintsy hodidiana ho fitandroana ny fahasalamany. Na izany aza taorian’ilay voina nahazo azy tany Soanierana Ivongo iny dia niezaka hatrany ity tompon’andraiki-panjakana ity nanao ny asany, nanotrona ireo namany lavo, eny fa dia hatramin’ny famaliana ny fanasan’ny mpanao gazety tamin’ny haino aman-jery tsy miankina iray teto an-drenivohitra aza.
Pati sy Mirija
Legende : Legende: Ny SEG (ambonin’ny seza) notronin’ireo mpiara-miasa aminy
Ambanitsena Moto tafiditra tao ambany kamiao, olona iray no maty
Olona iray nitaingina moto ihany koa omaly no namoy ny ainy teny Ambanintsena any amin’ny lalam-pirenena faharoa. Raha araka ny vaovao azo dia nifanehitra tamin'ny kamiao iray lehibe ity moto izay nana taingin-droa ity.
Andranomanelatra RN7 Mpitondra bisikilety maty nofaohin'ny kamiao
Nitrangana lozam-pifamoivoizana teo avaratr'Andranomanelatra amin’ny lalam-pirenena faha-7, fidinana hiditra ny tananan'Andranotsara,